Mba 3 Special Edition - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Mba 3 Special Edition
Nabata na mbipụta pụrụ iche mbụ anyị
Dịka ngwụsị oge ọkọchị, ,gwọ Ọrụ isgwọ ahụ nwere obi ụtọ ịkpọsa na ọ bụ nkwado nke arụmọrụ Edinburgh nke 'The Coolidge Effect'.
Ihe Mgbochi Mgbaghara site na Fools Fools bụ n'izu a na Traverse Theatre na Edinburgh
Onyinye Ụgwọ Ụtọ na-enwe obi ụtọ ịbụ onye na-akwado ihe egwuregwu ọhụrụ na-akpali akpali Nsogbu Coolidge site The Wonder Fools. Anyị na-agba gị ume ka ị bịa ma hụ ya. Nkọwa banyere oge na ebe dị n'okpuru.
Na 2017, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-eto eto na ọnụego ọnụ ọgụgụ: na UK naanị, a na-elele oge 7 nde porn kwa ụbọchị. Dika mmadu nwere ike inweta ihe ndi na-ekiri ihe ndi ozo, otua ka anyi nwere ike ikwu okwu banyere ya. Nsogbu Coolidge achọ imebi nke a.
Na isi nke ihe na-eme ka ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet dị ka ụlọ ọrụ multi-ijeri dollar Nsogbu Coolidge. Ihe omuma a, nke bu uzo nke okike, ka edeputara ayi ka ayi choo ndi ozo di na nwunye mgbe ihe omuma nke ichikota ka aga eme. Ọ na-arụ ọrụ eme ka ụlọ, ma ọ bụ na-enwe nkụda mmụọ, otu onye ma ọ bụ ihe mkpali nke ọnụnọ ya na-abaghị 'ụgwọ ọrụ' na ụbụrụ oge ochie. Ka oge na-aga, anyị na-enweghi mmasị maka otu onye ahụ na-enwe mmekọahụ.
N'ịbụ ndị sitere na mkparịta ụka na ndị na-akwado porn, ndị na-eri ahụ, ndị ọkachamara ahụike uche, ndị na-ahụ maka ndị mmuta na ndị ọkà mmụta sayensị, akụkọ a na echiche ndị a pụrụ iche na-agwa site na 4 na-agbakọta akụkọ: George, onye Gameboy na-eto eto; Gary, nna ya furu efu n'ime omimi nke onwe ya; Gail, onye na-emepụta ihe nkiri porn na Retrospect, onye omekorọbụ na-achọ ka ị ghọta.
Nsogbu Coolidge na-eji ngwakọta mmekọrịta nke ịkọ akụkọ, uri na sayensị iji nyochaa otú ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ si emetụta ahụ ike anyị, mmekọrịta na ahụmịhe mmekọahụ. Na Iche ndi nzuzu, otu ihe nkiri na-akpali akpali ma na-agbanwe agbanwe, aghọtala ihe ngosi nke oge a ma mee ka ọ bụrụ ihe egwu ọhụrụ na-emetụ n'ahụ.
Enyere ihe ngosi a Nkwupụta Pụrụ Iche dịka akụkụ nke "Ihe Ebube Ebube" na New Wolsey aterlọ ihe nkiri nke dị na Ipswich na PULSE Festival na 2017. can nwere ike ịhụ ha na ebe ndị a:
Egwuregwu ihe nkiri, Edinburgh: 20-22nd September 2017
Ụlọ ihe nkiri Tron, Glasgow: 27-30 September
New Diorama Ụlọ ihe nkiri, London: 15 November
Tiketi na Ozi: wonderfools.co.uk